बच्चाहरु "युद्ध खेल।" प्ले कसैले "हाम्रो", कसैले नाजीहरूले। र सधैं "हाम्रो" जीत। यो प्राकृतिक छ। अझै पनि कसरी वर्तमान युद्ध बारे छोराछोरीलाई सिकाउन?
, को नाजुक बच्चा वर्षा हानिकारक बिना युद्ध बारेमा बच्चाहरु बताउन कसरी? र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मान्छे को दुखाइ र महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध मा विजय को आनन्द तिनीहरूलाई व्यक्त गर्न।
भेटेरान छोड्नुहोस् ...
आधुनिक वयस्क आमा र बाबु शायद अझै पनि नजिक युद्ध, भेटेरान, मे9को विषयवस्तु। आखिर, लगभग हरेक परिवार महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को प्रत्यक्ष सहभागी बस्थे।
हुँदा सानो, प्रामाणिक कथाहरू र जीवनको बारेमा हजुरबा हजुरआमाले र समय कठिनाइ सुनेर हालको वयस्क। Kindergartens मा, विद्यालय एक धेरै लामो समय को देशभक्ति शिक्षा भुक्तानी।
चलचित्र, किताब, छोराछोरी सारा अवस्था महसुस यी लडाकों को कथाहरू मदत गरेका छन्। र यो अक्सर, कि प्ले "युद्ध खेल", को मान्छे fascists हुन सहमत कहिल्यै भयो, सबैका लागि "हाम्रो" हुन चाहन्थे।
अब, धेरै वृद्धहरुको सधैंभरि हामीलाई बाट गएका छन्। को घेरा बारे प्रथम हात कथाहरू सुन्न र भोकमरी अब सम्भव छ। तर इतिहास छैन rewritten गर्न सकिन्छ। बच्चाहरु कुनै पनि समयमा थाहा र आफ्नो पुर्खाहरूको heroism आदर गर्न आवश्यक छ।
यो विजय कस्तो छ?
छोराछोरीको उमेर आधारमा महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बारे जानकारी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। हाम्रो देशमा धेरै सत्यनिष्ठा विजय दिन मनाउन। Toddlers अक्सर जसलाई पराजित गर्ने एक छुट्टी कस्तो बारेमा प्रश्नहरू, सोध्न किन, उहाँको नजरमा आँसु।
त्यसैले यसको बारेमा महान् रूसी विजय छोराछोरीलाई बताउन आवश्यक छ। यो चलचित्र हेर्दै, सान्दर्भिक पुस्तक पढ्दा मदत गर्नेछ।
मूल कुराहरू सुरु
अझै युद्ध - विषय धेरै विवादास्पद र गाह्रो छ। तदनुसार, प्रश्न बच्चाहरु छैन चोट वा तिनीहरूलाई डरा सबै दुखाइ र तर्साउने, व्याख्या गर्न कसरी युद्ध, बारेमा बच्चाहरु बताउन कसरी उत्पन्न हुन्छ।
यो बच्चा मनोवैज्ञानिक, सामान्य जानकारी सुरु गर्न सल्लाह भएका शब्दहरू सुन्न आवश्यक छ। बिस्तारै, वर्तमान ज्ञान थप अचाक्ली छ।
मुख्य कुरा हो - धेरै मान्छे र धेरै बस नष्ट बन्धनमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ जो मानवजातिको, को इतिहास मा युद्ध को सबै भन्दा सबै भन्दा भयानक र - दोस्रो विश्व भन्ने विचार व्यक्त गर्न।
बच्चाहरु सोभियत सेना र सम्पूर्ण सोभियत मान्छे मात्र होइन रूसी भूमि र मान्छे, तर पनि धेरै युरोपेली देशहरूमा जारी, नाजीहरूले सामना गर्न मदत छन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ।
र युद्ध - कि खराब छ?
कसरी युद्ध बारेमा बच्चाहरु बताउन Pondering, यो जरूरी प्रश्नको जवाफ उठ्दा महत्त्वपूर्ण छ: "अनि युद्ध - कि खराब छ?" यो लड लाभ उठाउन सक्छौं कि जस्तो लाग्न सक्छ।
युद्ध बारे बच्चाहरु कुरा, यो नियम, बिजुली मा मान्छे, सुरु कि जोड गर्न आवश्यक छ। तर उदाहरणका लागि, सम्पूर्ण जर्मन राष्ट्र खराब छ, कि लाग्छ छैन।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बारेमा बच्चाहरु जानकारी प्रस्तुत, यो जर्मनी मा धेरै मान्छे पनि, जीवन धेरै खराब थियो भने गर्नुपर्छ। सबै मान्छे समर्थित हिटलर, र यो तिनीहरूले सजाय थिए।
आज छोराछोरी, पनि toddlers अक्सर प्ले कम्प्युटर "शूटर"। यो एक खेल जस्तै हो - यहाँ यो युद्ध एक misconception अक्सर छ। को अन्त्य रुचि थिएन, म सबै फेरि सुरु। र खेलाडीहरू धेरै जीवन छ। यो युद्ध बारे छोराछोरीलाई सही जानकारी दिन बताउन र धेरै मानिसहरू मरे र पुनर्जीवित थिएनन् कसरी पुस्तकहरू, चलचित्र, को मद्दतले देखाउन आवश्यक छ।
बारेमा युद्ध को पहिले नै हुनुपर्छ कुरा सुरु पूर्व-विद्यालय उमेर। मनोवैज्ञानिक द्वारा सिफारिस, यो सबै भयानक र रक्तपात देखाउन छैन आवश्यक छ।
युद्ध बारे छोराछोरीलाई कसरी बताउन? अवधारणा नै सुरु हुन्छ। यो के हो? मान्छे किन लडाई गर्छन र तिनीहरूले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
युद्ध समयमा चलचित्रमा शो तिनीहरूले चिन्ता छ कि साधारण मान्छे बाँचिरहेका छौं।
सार बारेमा बताउन पछि, तपाईं महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बारेमा कथा अघि बढ्नु गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चा आफ्नो मान्छे र आफ्नो महिमित राष्ट्र स्वामित्वको लागि गर्व र आदर महसुस गर्नुपर्छ।
तिनीहरूले यो पनि परिवार लागू भनेर बुझ्न सकून् भनेर युद्ध बारे छोराछोरीलाई कसरी बताउन? पक्कै पनि धेरै घरहरू ध्यान पदक, आदेश र हजुरबा हजुरआमाले भण्डारण गरेका छन्। धेरै युद्ध वर्ष पुरानो फोटो, अक्षर र अन्य कुराहरू कदर।
यो बच्चा को सबै देखाउँछन्। हामीलाई फोटो मा पनि चित्रण गरिएको छ जो जसको लागि उहाँले एक पदक प्राप्त, भन्नुहोस्, व्याख्या।
आफ्नो शहर सैन्य महिमा को एक संग्रहालय छ भने, आवश्यक बच्चा सीमित। अनुभवी गाइड पनि युद्ध बच्चाहरु बारेमा रोचक कथाहरू भन्छु, र तपाईं हुनेछ।
संग्रहालय भ्रमण पछि, तपाईं कुरा स्पष्ट छ, आफ्नो बच्चा सैन्य वर्दी देखाउन सक्नुहुन्छ dugout र सैन्य उपकरण हेर्नुहोस्। त्यसैले बच्चा साँच्चै वर्तमान जीवन र एक सैनिक जीवन सक्छन्।
आँसु संग छुट्टी
मे9उत्सव अघि, धेरै आमाबाबुले छोराछोरीको लागि कुराकानी र शैक्षिक गतिविधिहरु सुरु गर्नुहोस्। युद्ध बारे प्राथमिक विद्यालय बच्चाहरु र स्कूलमा बताउनुहोस्।
शिक्षक संग मिलेर काम गर्न धेरै राम्रो। वर्ग मा छोराछोरी, शिक्षक को कथा सुन्न विभिन्न गतिविधिहरु पूरा, पुस्तकहरू पढ्न।
घरहरू पनि विषयगत सप्ताह सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। फेला पार्न र युद्ध बच्चाहरु बारेमा कविता पढ्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईं सबैभन्दा रोचक केही पनि सिक्न सक्छन्।
बच्चाहरु शिल्प के संग, पढ्न छलफल युद्ध बारे पुस्तकहरु। बच्चाहरु रूसी विजयको उत्सव मुड र गर्व महसुस गर्न आवश्यक छ।
आफैलाई तयार र जाने निश्चित हुनुहोस् विजय परेड। , स्मारक गर्न बच्चालाई फूल संग सँगै राख्न युद्ध बारे गीतहरू सुन्न। गर्व सैनिक, सैन्य उपकरण राज्य को सुरक्षा को लागि अवस्थित जो मार्चिङ कसरी, तिनीहरूले वृद्धहरुको आदर कसरी हेर्न बच्चाहरु रोचक हुनेछ।
धेरै राम्रो, वृद्धहरुको आफ्नो छिमेकी बस्नुहुन्छ भने। सँगै आफ्नो बच्चा संग कार्ड को रूप मा एक उपहार बनाउन र दे। अनुभवी कथाहरू सुन्न र घरेलू समस्या सुलझाने तपाईंको सहयोगको प्रस्ताव।
पक्कै पनि छोराछोरीले लगाउने बारेमा सोध्न, सुन्दर धारीदार रिबन को सडकमा हेर्न हुनेछ।
यो उनि जसको लागि एक छुट्टी को विशेषताहरु, र तिनीहरूले के अर्थ बारेमा बच्चाहरु बताउन अर्को कारण हो।
सेन्ट जर्ज रिबन - हाम्रो विजय को प्रतीक र छुट्टी को एक प्रतीक। यो याद र वृद्धहरुको आदर मरेका र शो को स्मृति आदर लगाउने।
सबैभन्दा हाल त्यहाँ सडकमा रिबन वितरण गर्न सुरु गर्दा, ठूलो परम्परा थियो। यो कार्य मानिसहरूलाई लाग्यो र वृद्धहरुको को हेरविचार भनेर सिपाहीहरूले को heroism मानिसहरूलाई स्मरण गराउन गरियो।
यो परम्परा मूल लिएको छ। अब हाम्रो बच्चाहरु पनि सेन्ट जर्ज रिबन लगाउने र ठूलो छुट्टी को भाग महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
किन सेन्ट जर्ज गरेको टेप कि रंग बच्चाहरु बताउन निश्चित हुनुहोस्। तिनीहरूले पदक संयोजनमा जारी गर्दै "जर्मनी विजय लागि"।
सुन्तला र कालो रंग आगो र धुवाँ प्रतिनिधित्व गर्छ। यो वीरता, साहस र साहस सैनिक एक पदक प्राप्त गरेको छ।
वयस्क बस तिनीहरूलाई जानकारी बुझ्न को लागि सबै सम्भव दिन, युद्ध बारे छोराछोरीलाई कथा पढ्न छन्। र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, किनभने त्यहाँ महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध छोयो छैन कि एक परिवार छ। कसैले लडे, कसैले अगाडि असल लागि काम गरेको छ हजुरबा हजुरआमाले, कसैले कब्जाको बाँचे।
पाल्तु जनावर र कुराकानी
पुरानो हटाउन परिवार एल्बम। आफ्नो हजुरबा हजुरआमाले कहाँ देखाइयो। हामीलाई भएका ती जो एक भन्नुहोस्। युद्ध समयमा आफ्नो जीवन बारे एक रोचक कथा भन्नुहोस्।
त्यसपछि युद्ध बारे कविता पढ्न। बच्चाहरु नाजीहरूले हाम्रो मातृभूमि आक्रमण कसरी र कहिले बारेमा सुन्न उपयोगी हुनेछ। यसलाई बिहान र चेतावनी बिना, अचानक भयो भन्ने तथ्यलाई।
पत्ता लगाउन र चित्रहरू वा समय, सैनिक 'वर्दी, को नष्ट सहर र गाउँको सैन्य उपकरण को फोटो देखाउँछ।
धेरै सूचनात्मक उपाय र प्रदर्शन 125 ग्राम रोटी। आखिर, यो पुरा दिन र केही लागि खाना प्राप्त गर्न असम्भव थियो। र यो बावजुद, यो आवश्यक हरेक दिन कारखाना जान र पछिल्लो प्रदान गर्न, अगाडि लागि गोले बनाउन थियो। आखिर, समर्थन बिना पिटे गर्न सकिएन। सबै मानिसहरू मातृभूमि रक्षा गर्न उठेर।
त्यसपछि युद्ध बारे गीतहरू सुन्न दिन निश्चित हुन। बच्चाहरु केही हृदय सम्झिन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। युद्ध फिलिम हेर्न। तर पहिले आफैलाई जाँच गर्नुहोस्। पुस्तक वा चलचित्र संग एक्लै बच्चा छोड्ने छैन। सँगै हुन र तिनीहरूले देखे वा पढ्न के छलफल गर्न निश्चित हुनुहोस्।
बोल्दा गल्ती जोगिन
तपाईं पनि धेरै हरर कुरा र रक्तपात देखाउन आवश्यक छैन।
गर्न पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु यातना बच्चाहरु र कुकुर र बिरालोहरु खाने गर्दा भोक बारेमा, एकाग्रता शिविरमा बारेमा कुरा गर्न यो आवश्यक छ। यस कारण, बच्चाहरु सपनाहरू र स्नायु tics अनुभव हुन सक्छ। तर मा उच्च विद्यालय, स्कूल पहिले नै आवश्यक यस्तो जानकारी दिन छ।
झूटा जानकारी दिन आवश्यक छैन। निस्सन्देह, प्रिस्कूल महत्वपूर्ण - रूसी मान्छे जित्यो थियो भनेर थाह। तर बच्चाहरु पहिले नै छैन सबै रूसी युद्ध लागि तयार थिएनन् कि त चिल्लो, र लगभग मास्को पारित थियो भनेर बुझ्न छन्।
तपाईं युद्ध डराउँछन् रूपमा कसरी यो मुद्दा निराशा हुन सक्छ देखाउन, अधिक भावना देखाउन नडराऊ। र कहिल्यै निडर पिताजी अचानक उहाँले युद्ध को डर छ कि confesses भने, छोराछोरीलाई सैनिकहरु को जीवनको बारेमा केवल कहानी भन्दा यो धेरै एक छाप बढी गर्नेछ।
खातामा उमेर र बच्चाको psyche लिन यस्तो युद्ध रूपमा एक विषय मा साक्षात्कार र कथाहरू, संग मुख्य कुरा। यो विषय बारे कुरा, र मृत्यु को अवधारणा बेवास्ता गर्नुहोस्। यो 5-6 वर्ष अघि छोराछोरीलाई सुन्न तयार छैन भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो उमेरमा बच्चालाई आफैलाई पहिले नै सोध्न र विषयमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। सत्य ढाकछोप गर्न, तर बच्चा हावी गर्न आवश्यक छैन।
लाग्छ, हाम्रा छोराछोरीको लागि यी वृद्धहरुको लगभग पूरा गर्न सक्दैन र साँचो कथाहरू सुन्न छ। Toddlers मात्र परिचित हुन सक्छ "युद्ध को बच्चाहरु।" तर तिनीहरूले उनीहरूको उमेर धेरै थाहा छैन हुन सक्छ, र दुखाइ र युद्ध को त्रास व्यक्त गर्न।
हो, लगभग सबै परिवार युद्ध छोयो। हाम्रो पुर्खाहरूको धेरै bravely, शत्रु संग लडे सबै torments र बोझबाट भोगे। यसलाई फेरि कहिल्यै हुनुपर्छ। तर हुन भएन, छोराछोरी समय सबै जान्नु आवश्यक छ। शान्त राख्न आवश्यक छैन। महान् विजय, रूसी मान्छे को साहस को युद्ध बारे बच्चाहरु कुरा।
कुराकानी, किताब, चलचित्र, आवधिक वृद्धहरुको संग सभाहरूमा - यो पछिल्लो जडान गर्न हामीलाई मदत गर्ने एक unbreakable मुद्दा छ। यसलाई तोड्न छैन। यो सम्झना र सम्मान गर्नु पर्छ।
बच्चालाई लागि मिसिन: एक खेलौना रेडियो नियन्त्रण कसरी चयन गर्न
जब तपाईं बच्चा गर्न गाई गरेको दूध दिन सक्छ? गाई गरेको दूध पानी संग पतला छ?
लैक्टिक एसिड - एक सुन्दर र स्वस्थ छाला गर्न प्रमुख
के पातलो चिया पिउन राम्रो छ?
Krasnovishersk, पर्म क्षेत्र: ठाँउहरु, आफ्नो फोटो र कहानी
विद्यालयमा एक ऐच्छिक के हो? को ऐच्छिक ऐच्छिक फरक के छ?
बेलारुसी अस्पताल "सेतो टावर": किफायती मूल्यहरु मा एक आरामदायक रहन
दोष र के छ जो: काममा तनाव?
क्यान्सर बेच्न र कहाँ किन्न सक्छ
बच्चालाई लागि नांद कसरी चयन गर्ने?